အချိန်ပိုင်းနှင့် အချိန်ပြည့် အရောင်းအဝယ်ကြားမှ ကွာခြားချက်
သင့်ဘဝနှင့် အရောင်းအဝယ် ဘယ်လိုပေါင်းစပ်မလဲ?
အရောင်းအဝယ်ကို သင့်အလုပ်အနေဖြင့် ထည့်စဉ်းစားပါက၊ စိန်ခေါ်မှုအများအပြားအတွက် ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ရောင်းဝယ်သူအတော်များများသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိအားနှင့် ပတ်သတ်တာမခံနိုင်ဘဲ အစထဲကနေ ကျရှုံးမှုအတွက်ပြင်ဆင်ထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ အလွတ်တမ်း (သို့) စီးပွားရေးအရ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အောင်မြင်တဲ့အရောင်းအဝယ်ရဲ့ သော့ချက်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်-အသိအမြင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူကမှတော့ သူ့ကိုယ်သူအတွက် သီးသန့်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီး မပြင်ဆင်ထားကြပါဘူး။
အချိန်ပြည့် ရောင်းဝယ်သူဖြစ်ဖို့ ခက်ခဲပုံရတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်များနဲ့ စလိုက်ရအောင်။
• လွတ်လပ်မှု။ လူတစ်ချို့အတွက် ဒါဟာ ကောင်းတဲ့အချက် ဖြစ်နေချိန်မှာ၊ တစ်ချို့အတွက်ကတော့ ထာဝရရုန်းကန်မှုဖြစ်နေပါတယ်။ အစီအစဉ်၊ သင့်အလုပ်ဇယားနဲ့ ယုံကြည်ချက်ရှိရန် လိုအပ်ပါတယ်။ အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းကတော့ အချိန်ဆွဲတာကို ကျော်လွှားဖို့ပါပဲ။ ဘယ်သူမှ သင့်ကိုမထိန်းချုပ်တဲ့အခါ၊ လိုအပ်သမျှအရာအားလုံး လုပ်ခြင်းမှရှောင်ရှားပြီး၊ အချိန်ဖြုန်းခြင်းကို ပြောင်းသွားဖို့လွယ်တတ်ပါတယ်။
• တာဝန်ယူမှု။ ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးဖြစ်ရခြင်းက ဖြစ်ပျက်သမျှအားလုံးအတွက် တာဝန်အပြည့်ယူလိုစိတ်ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ သင့်စိတ်နဲ့ လုပ်ရပ်အပေါ် ထိန်းချုပ်ရန်လိုပါတယ်။
• အချိန်-စီမံခန့်ခွဲမှု။ အလွတ်တမ်း (သို့) စွန့်ဦးအလုပ်တိုင်း အလုပ်နဲ့ အားလပ်ချိန်ကြားမှာ အကောင်းဆုံး ထိန်းညှိမှုရှာရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အရောင်းအဝယ်ဟာ ချန်လှပ်ထားရမည့်အရာမဟုတ်ပါ။ သို့သော်၊ သင်လေ့လာရန်၊ သုတေသန အတော်များများလုပ်ရန် လိုအပ်သည့်အတွက် အချိန်များများ ပိုလိုပါတယ်။ အနေအထားတစ်ခုမှာဖွင့်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ တစ်နေ့လုံး၊ တစ်ပတ်လုံး (သို့) တစ်လလုံးတောင်မှ သင့်အလုပ်ကို သင့်နဲ့အတူလုပ်ဆောင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
• သင့်အခွန်ဘဏ္ဍာတွေဟာ သင့်ပေါ်တွင်သာမူတည်ပါတယ်။ လကုန်ရင် သေချာတဲ့ ငွေပမာဏတစ်ခုတော့ ရလိမ့်မယ်လို့သိတဲ့အတွက် သင့်ပုံမှန်အလုပ်မှာ ခဏတဖြုတ်တော့ အနားယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရောင်းအဝယ်ဟာ သင့်အချိန်ပြည့်အလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ အာရုံစိုက်ထားဖို့၊ အမြဲအချိန်နဲ့ တပြေးညီဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။
• လူမှုရေး အဆက်အသွယ်ကန့်သတ်ချက်။ ဒါဟာ အမှန်ပါ၊ သင့်မှာ ကုမ္ပဏီ (သို့) "အရောင်းအဝယ်-မိတ်ဖက်များ" အတွက် အလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်သရွေ့ အရောင်းအဝယ်ဆိုတာ အထီးကျန်တဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုပါ။
• အခြားလူတွေအပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။ တစ်နေ့လုံး သင့်အတွက်သင် အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်၊ သင့်အိတ်ကပ်ကလွဲလို့ မည်သူ (သို့) မည်သည့်အရာကိုမျှ ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။
• အောင်မြင်သော အရောင်းအဝယ်တစ်ခု၏ သက်ရောက်မှု။ တစ်ခါတစ်ရံ အပေးအယူကောင်းတစ်ခုဟာ သင့်ကို မျက်ကန်းတစ်ဦးလိုဖြစ်စေပြီး၊ သင့်အပြုအမူကို သက်ရောက်စေပါတယ်။ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေကို အမြဲထည့်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
စာရင်းကတော့ စိတ်ဓာတ်ကျစရာကောင်းသော်လည်း၊ ဒါဟာ သင် အရောင်းအဝယ်ရပ်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အချိန်ပြည့်အရောင်းအဝယ်သည် သင့်အတွက် ကြမ်းတမ်းပါက၊ အခုအတွက်တော့၊ အခြားရွေးချယ်မှုတွေကိုသုံးပြီး သင့်ဘဝကိုမြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။
• အချိန်ပိုင်း ရောင်းဝယ်သူ။ အရံဝင်ငွေ သင်နှစ်သက်ရာအလုပ်ကို အရောင်းအဝယ်နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ သင့်ကို နိုင်-နိုင် အခြေအနေဖြစ်စေပါတယ်: ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ နက်ရှိုင်းစွာထိခိုက်မှာ မဟုတ်တဲ့အတောအတွင်း လုပ်သားတစ်ဦးအနေနဲ့ အလုပ်ဖြုတ်ခံရမှာ ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။
• ရောင်းဝယ်သူနှင့် စီးပွားရေးပိုင်ရှင်။ အရောင်းအဝယ်ဟာ စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအတွက် ကောင်းမွန်သော ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေါ့၊ အစပိုင်းတော့ မသေချာမှုတွေနဲ့ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းကြောင်းနှစ်ခုဖောက်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ဝင်ငွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် စီမံပါက၊ သင့်ချဉ်းကပ်မှု အလုံးစုံ တိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။ အရောင်းအဝယ်ကို သင့်အရံစီမံကိန်းအနေနဲ့ ထားရှိခြင်းက ဦးစားပေးအစီအစဉ်တွေကို ပြန်လည်ထိန်းညှိရာတွင် အကူညီရစေပါလိမ့်မည်။
• ရောင်းဝယ်သူနဲ့ စွဲလမ်းမှုစီမံကိန်း။ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအနဖြင့်၊ သင့်ဝါသနာနဲ့ ငွေရှာနိုင်ပြီး၊ အရောင်းအဝယ်နဲ့ ဒါကိုပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ အရောင်းအဝယ်ဟာ သင့်စွဲလမ်းမှုစီမံကိန်းဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။ ဝါသနာနှစ်ခုရှိထားခြင်းက ဘယ်လောက်မိုက်လဲဆိုတာ တွေးကြည့်ပါ!
အရောင်းအဝယ်ကို သင့်အရံ လှုပ်ရှားမှုအနေဖြင့် ထားရှိခြင်းက သင့်ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရစေပြီး၊ ပိုပြီးအာရုံစိုက်လာနိုင်စေပါတယ်။ သင်မြင်တဲ့အတိုင်း၊ အချိန်ပြည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အချိန်ပိုင်းရောင်းဝယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုစလုံးမှာ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးရှိကြပါတယ်။ သင်နှင့်ပိုသင့်လျှော်မည့်အရာကို ရွေးပြီး၊ သင်စတင်ချင်တဲ့အချိန်မရွေး အရောင်းအဝယ်စတင်ပါ။